yig_admin, Author at Young Insurance - Life - Page2of 8
Home » Archives for yig_admin » Page 2
Author Archives: yig_admin
အာမခံထားတာက တကယ်ရော အကာအကွယ်ဖြစ်ရဲ့လား?
Category : Article, Insurance | Date : February 28, 2020
အာမခံထားတာက တကယ်ရော အကာအကွယ်ဖြစ်ရဲ့လား? ဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက် ဖြေကြားပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်လောက်က မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့စားသောက်ဆိုင်ဟာ ဆိုင်မှာသုံးတဲ့ ဂက်စ်အိုးကနေတဆင့် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်…မီးလောင်မှုကြောင့် ဆိုင်ရဲ့ ၆၅% လောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့တော့ သူတို့ယိမ်းယိုင်သွားမလားလို့ စိုးရိမ်မိပါတယ်...
ဒါပေမဲ့ ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကတော့ ခဏအတွင်းပဲ သူ့ဆိုင်ကို ပြန်လည်တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ သူတို့စုဆောင်းငွေများပြားပုံရတယ်လို့ တွေးမိပါတယ်...
သူတို့ဆိုင်ရဲ့ ပျက်စီးသွားတဲ့ ၆၅% လောက်ကို အာမခံ လျော်ကြေးရလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်... သူတို့ စုဆောင်းပုံကတော့ အတော်ကိုအတုယူစရာကောင်းပါတယ်၊ ကိုယ်ရဲ့ စုဆောင်းထားတဲ့ အာမခံ ငွေကြေးကြောင့်သာ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေ ကာမိခဲ့တာပါ...
တကယ်ဆို သူမသာ အာမခံမထားခဲ့ဘူးဆိုရင် သူမရဲ့ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုက မနည်းလှပါဘူး. ဒါကြောင့် အမျိုးမျိုးသော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေနဲ့ မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုတွေ အတွက် အာမခံဝန်ဆောင်မှုဟာ အပြည့်အဝ အကာအကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲခင်ဗျာ…
ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေတို့လည်း မိသားစုအတွက်ပဲဖြစ်စေ ၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွက်ပဲဖြစ်စေ အာမခံဝန်ဆောင်မှုတွေ ရယူထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မှန်ကန်တိကျပြီး အမြန်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ Young Insurance မှာ အာမခံရယူနိုင်ပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ…
Category : Article, Education, Insurance | Date : February 24, 2020
" ပညာရွှေအိုး လူမခိုး “ တဲ့…
ရှေးပညာရှိတွေ မိန့်ဆိုခဲ့သလို ဘယ်သူဘယ်ဝါကမှ တိုက်ယူ ခိုးယူလို့မရနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော အဖိုးတန်ရတနာဟာ “ပညာ” ပါပဲ…
ဒါကြောင့်လည်း မိဘတိုင်းဟာ သားသမီးတွေကို အခြားပိုင်ဆိုင်မှုတွေထက် ပညာရေးအမွေ ကိုသာ အဓိကထားပြီးပေးကြတာပေါ့…
မိဘတိုင်းက သားသမီးတိုင်းကို ပညာတတ်မြောက်စေချင်ပေမယ့် ဘဝကံအပြောင်းအလဲတွေကြောင့် သားသမီးတွေရဲ့ ပညာရေးကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင် အထောက်အပံ့ မပေးနိုင်မှာကိုလည်း စိုးရိမ်ပူပန်မိကြမှာပါ...
ဒီလို စိုးရိမ်ပူပန်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ မိဘတွေအနေနဲ့ အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေ ချမှတ်ထားဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ…
တိကျခိုင်မာတဲ့ အနာဂတ်အစီအမံတစ်ခုချမှတ်နိုင်ဖို့ ယမ်းအာမခံရဲ့ ပညာရေးအာမခံနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်...
“ ပညာရေး အသက်အာမခံ ” ဆိုတာက
မိဘကနေ သားသမီးပညာရေးအတွက် မိမိအသက်ကိုအာမခံထားနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်လို့ မိဘတိုင်း ရယူထားသင့်တဲ့ အနာဂတ်အစီအစဉ်တစ်ခုပါ…
အာမခံ သက်တမ်းကရော ဘယ်လောက်လဲ
အာမခံသက်တမ်းမှာ (၉)နှစ် မှ (၁၄)နှစ် အထိ ထားရှိနိုင်ပါတယ်...
ပညာရေးအကျိုးခံစားခွင့် အပြင် သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့်၊ ထာဝစဉ်မသန်မစွမ်းအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ချေးငွေရရှိနိုင်ခြင်း စတာတွေရနိုင်ပါတယ်...
ဒီတော့ အတိမ်းအစောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် သားသမီးတွေအနေနဲ့ တိကျသေချာတဲ့ အနာဂတ်တစ်ခုကို တည်ထောင်နိုင်ဖို့ အထောက်အပံ့ ရရှိနိုင်မယ့် “ ပညာရေး အသက်အာမခံ ” ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ယမ်းအာမခံကို အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်...
Category : Article, Family Life Style | Date :
သိပ်ကောင်းတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ ငွေကြေးစုဆောင်းနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေအများကြီး ရှိတဲ့အနက် “အာမခံ” စနစ်ကို ဘာကြောင့်ရွေးချယ်သင့်သလဲ လို့ မေးလာတဲ့အခါ စကားလုံးတစ်လုံးထဲနဲ့ အဖြေပေးရရင်တော့ “ကုန်ကျစရိတ်” ကြောင့်ပါပဲ…
မထင်မှတ်ထားပဲ ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ပွားသောအခါ၊ နေအိမ်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အခါ ကားတစ်စီးပြန်လည်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ ၊ အိမ်တစ်လုံးပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ကူနိုင်သလို မမာမကျန်းဖြစ်လို့ ဆေးကုသမှုခံယူရတဲ့အခါမှာလည်း မဖြစ်မနေအသုံးပြုရမယ့် ကုန်ကျစရိတ်တွေရှိပါတယ်...
ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကို ငွေကြေးအရ အကောင်းဆုံးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့ အာမခံထားရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်၊ အာမခံထားရှိရာမှာ အသုံးပြုရတဲ့ ငွေကြေးပမာဏဟာ အထက်ပါကုန်ကျစရိတ်တွေနဲ့နှိုင်းစာရင် မယှဉ်သာအောင် နည်းပါးလှပါတယ်...
အမျိုးမျိုးသော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေနဲ့ မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုတွေ အတွက် အာမခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအရယူထားခြင်းက မိမိနဲ့မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်၊ မိသားစုတွေကို အန္တရာယ်ကင်းကင်းလုံခြုံစိတ်အေးချမ်းသာစွာနေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...
အတိကျဆုံး နဲ့ အမြန်ဆန်ဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ ယမ်းအာမခံနဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ထားမယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေတို့မိသားစုအတွက် လှပတဲ့အနာဂတ်တွေပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ အသေအချာပဲမို့ ယမ်းအာမခံမှာ အခုပဲဝန်ဆောင်မှုရယူထားဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ...
အနာဂတ်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး စီးပွားဥစ္စာတွေ ရှာဖွေစုစောင်းထားပေမယ့်လည်း…ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေသာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင် ငါ့မိသားစုတော့အခက်တွေ့နိုင်ရဲ့ ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ စိတ်ပူပန်နေရတုန်းလား?
ကျွန်တော်လည်း ဒီလိုပဲပူပန်ခဲ့ဖူးပါတယ်. အခုတော့ နောင်ရေးအတွက်တွေးပူစရာမလိုတော့ဘဲ စိတ်ချလက်ချ အေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ပါပြီ. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်အာမခံဝန်ဆောင်မှုရယူထားလိုက်ပြီလေ…
ဘယ်လိုစပြီးအာမခံထားဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ အာမခံလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ စကားဝိုင်းတစ်ခုကနေ ကြားလိုက်မိတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကြောင့်ပါပဲ…အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ဘဏ်ချေးငွေယူပြီး စက်ရုံတစ်ခုတည်ထောင်လိုက်တယ်. တစ်နေ့မှာတော့ ဘဏ်ချေးငွေတောင်မကျေသေးတဲ့ စက်ရုံကြီးဟာမီးလောင်ပြာကျသွားခဲ့တယ်…
ဒါပေမယ့် အာမခံထားခြင်းအကျိုးကြောင့် သူမဟာ လျော်ကြေးပြန်ရရှိခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းကိုပြန်ထူထောင်နိုင်ခဲ့တာ အခုဆိုရင်တော်တော်ကြီးအောင်မြင်နေပြီ ဆိုတာပါပဲ…
ဒီအကြောင်းကို ကြားပြီးကတည်းက နောင်အနာဂတ်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာကို ကြိုတင်မှန်းဆမရနိုင်လို့ အကာအကွယ်အနေနဲ့ အာမခံဝန်ဆောင်မှုဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာကြောင့် အာမခံထားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…
မိတ်ဆွေတို့လည်း မိသားစု အနာဂတ်ဘဝလှပစေဖို့ အပြည့်အဝအကာအကွယ်ဖြစ်စေမယ့် ယမ်းအာမခံရဲ့ အာမခံဝန်ဆောင်မှုတွေကို ရယူထားသင့်ပါတယ်လို့ အကြံပြုလိုက်ပါရစေ...
အမျိုးမျိုးသော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေနဲ့ မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုတွေ အတွက် အသက်အာမခံ၊ ကျန်းမာရေးအာမခံ၊ ခရီးသွားအာမခံ၊ သမာဓိ အာမခံ၊ ပညာရေး အာမခံ၊ ကား အာမခံ၊ မီး အာမခံ စတဲ့အာမခံဝန်ဆောင်မှုတွေ ထားရှိနိုင်ပါတယ်...
အတိကျဆုံး နဲ့ အမြန်ဆန်ဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ ယမ်းအာမခံနဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ထားမယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေတို့မိသားစုအတွက် လှပတဲ့အနာဂတ်တွေပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ အသေအချာပဲမို့ ယမ်းအာမခံ မှာ အာမခံရယူထားဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ...
Category : Article, Our CSR | Date : February 22, 2020
ယမ်းအာမခံရဲ့ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမှုကြောင့် အာမခံထားသူ တိုင်း စိတ်အေးချမ်းသာယာစွာ၊ လုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ပါပြီ…
အာမခံစနစ်ဆိုတာ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေ နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် ပြုလုပ်ပေးတဲ့ တစ်ခုတည်းသော စနစ်တစ်ခုပါ… ယခုအခါမှာလည်း ကျွန်မတို့ယမ်းအာမခံမှ ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအတွက် အာမခံထားရှိသူ ဦးစိုးလှိုင် အား အာမခံလျော်ကြေးငွေ ၆၀၀၀၀၀ ကျပ် (ခြောက်သိန်းကျပ်တိတိ) ကို ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်…
​ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစုဘဝများကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်…?
” တိကျမြန်ဆန် ယမ်းအာမခံ “
Category : Activities, Our CSR | Date : February 17, 2020
ယမ်းအာမခံရဲ့ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမှုကြောင့် အာမခံထားသူ တိုင်း စိတ်အေးချမ်းသာယာစွာ၊ လုံ ခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ပါပြီ...
ယမ်းအာမခံ မှ ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအတွက် အာမခံထားရှိသူ မနှင်းပွင့်ဖြူ အား လျော်ကြေးငွေ (ငါးသောင်းကျပ်) တိတိကို ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်...
Category : Activities | Date : January 30, 2020